अन्तरिक्षमा कति स्याटेलाइट ?- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
स्याटेलाइटको मोनिटरिङ अस्ट्रियामा अवस्थित राष्ट्रसंघको अफिस फर आउटर स्पेस एफियर्स (यूएनओओएसए) ले गर्छ  । यूएनओओएसएका अनुसार हाल ४ हजार ८ सय ५७ वटा स्याटेलाइटले पृथ्वी परिक्रमा गरिरहेका छन्  ।
अन्तरिक्षमा ८ हजार १ सय २६ वटा वस्तु ‘लन्च’ गरिएको छ । युनियन अफ कन्सर्न्ड साइन्टिस्ट (यूसीएस) ले चालू अवस्थाको स्याटेलाइटको जानकारी राख्छ । उक्त संस्थाका अनुसार अहिले अन्तरिक्षमा १ हजार ९ सय ८० वटा चालू स्याटेलाइट छन् । बाँकी २ हजार ८ सय ७७ वटा वस्तु काम दिने अवस्थामा छैनन् ।
चालु अवस्थाका स्याटेलाइटहरू विशेष गरी सूचना, पृथ्वीको निगरानी, प्रविधिको विकास र प्रयोग, नेभिगेसन/जीपीएस, अन्तरिक्षको विज्ञान/ अवलोकन, पृथ्वीको विज्ञान अध्ययन गर्ने खालका छन् । जसमा व्यावसायिक, सरकारी, सुरक्षा र सर्वसाधारण प्रयोगकर्ताको छ । यूएनओओएसएका अनुसार ८१ वट मुलुकले स्याटलाइट प्रक्षेपण गरेका छन् । अमेरिकासँग ८ सय ५९, चीनसँग २५० र रूससँग १४६ वटा स्याटेलाइट छन् ।
स्याटेलाइटको आयु कति हुन्छ होला ? एरोस्पेस कर्पोरेसनका रकेट वैज्ञानिक जेफ ग्रुस्याङकीका अनुसार स्याटेलाइटको आयु यति नै भनेर भन्न सकिन्न । उनका अनुसार अन्तरिक्षको वातावरणमा कुनै बाहिरी प्रभाव नभए एउटा स्याटले १० देखि १५ वर्षसम्म काम गर्न सक्छ । अन्तरिक्षको वातावरण जतिबेला जे पनि हुन सक्ने भएकाले सानो प्रभावले पनि स्याटेलाइटलाई असर पुर्‍याउँछ ।
प्रकाशित : श्रावण १२, २०७६ ११:५४
श्रावण १२, २०७६ गोविन्द पोखरेल
यो वर्षको सुरुमै नेपालले अन्तरिक्षमा आफ्नै भूउपग्रह (स्याटेलाइट) पठाएपछि यसबारे धेरैको चासो बढेको छ  । कोपिलाको यो अंकमा हामी स्याटेलाइटबारे थुप्रै जानकारी लिएर आएका छौं  ।
नेपालले पठाएको नानो (सानो) स्याटेलाइटले के गर्दै छ ? नेपालले फेरि अर्को वर्ष प्रक्षेपण गर्न लागेको स्याटेलाइट कस्तो खाले हो ? वास्तवमा स्याटेलाइट के हो र यसले कसरी काम गर्छ ? पहिलोपल्ट कसले प्रक्षेपण गरेको थियो स्याटेलाइट ? अहिले आकाशमा कति स्याटेलाइट छन् ? यस्ता धेरै सवालको जवाफ यो लेखले दिने छ ।
नेपालले वैशाख ५ गते अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरेको ‘नेपाली स्याट–१’ नामको स्याटेलाइट नानो हो अर्थात् सानो । यसको लम्बाइ, चौढाइ र उचाइ १०/१० सेमी छ । तौल १ केजी ३ सय ग्राम । नेपाली झण्डा अंकित यो स्याटेलाइटले गत जुन १५ देखि अन्तरिक्षको परिक्रममा लगाउन थालिसकेको छ ।
यो स्याटेलाइट आभाष मास्के र हरिराम श्रेष्ठले निर्माण गरेका हुन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) को सहयोगमा स्याटेलाइट निर्माण गरिएको हो । निर्माणकर्तामध्येका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसको पहिलो मिसन तस्बिर खिच्नु रहेको छ ।’सानो आकारको भए पनि यो स्याटेलाइटले नेपाल अन्तरिक्ष युगमा प्रवेश गरेको छ । यसले नेपालको वैज्ञानिक अनुसन्धान र ‘स्पेस एक्सप्लोरेसन’ मा ठूलो मद्दत पुग्ने छ । सन् २०२० मा पनि नेपालको अर्को स्याटेलाइट लन्च हुँदै छ । भक्तपुरको ओरियन स्पेसले पिको स्याट लन्च गर्दै छ । यो नानो स्याटभन्दा आधा सानो हुन्छ । यो अध्ययनअनुसन्धान प्रयोजनका लागि लन्च गर्न लागिएको निर्माणकर्ता राकेशचन्द्र प्रजापतीले बताए ।
पृथ्वीको तल्लो अर्बिटमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन सबैभन्दा ठूलो भूउपग्रह हो । विश्वको पहिलो स्याटेलाइट रूसले निर्माण गरेको थियो । यसको नाम स्पुतनिक–१ हो । यो सन् १९५७ को अक्टोबरमा लन्च गरिएको थियो । त्यसको अर्को महिनामा रूसले स्पुतनिक–२ लन्च गर्‍यो ।
अमेरिकाले सन् १९५८ मा एक्स्प्लोरर–१ नामक पहिलो स्याटेलाइट लन्च गरेको थियो । स्याटेलाइटको मद्दतबाट फोन, टीभी, मौसमको जानकारी, जीपीएस नेभिगसनहरू हामीले थाहा पाइरहेका छौँ । वास्तवमा कुनै पनि ग्रहलाई परिक्रममा गर्ने वा ग्रहको वरिपरि घुम्ने पिण्डलाई उपग्रह (स्याटेलाइट) भनिन्छ । उपग्रह दुई किसिमका हुन्छन्, प्राकृतिक र मानव निर्मित । चन्द्रमा पृथ्वीको एउटा प्राकृतिक उपग्रह हो । किनभने यो पृथ्वीको वरिपरि घुमिरहन्छ । सूर्यका लागि पृथ्वी उपग्रह हो किनभने पृथ्वीले सूर्यको परिक्रमा गर्छ । प्राकृतिक उपग्रहरू डेढ सयभन्दा बढी छन् । जुपिटर (बृहस्पति) को ६७ वटा उपग्रह छन् ।
अब कृत्रिम उपग्रहको कुरा गरौं । यो स्याटेलाइट मानिसले बनाएको हो । यसका उद्देश्य धेरै छन् । विशेष गरेर ४ उद्देश्यमा केन्द्रित भएर मानिसले स्याटेलाइट बनाएको हो । मुख्यतः वैज्ञानिक खोज, प्रयोग तथा अनुसन्धान त्यसपछि सूचना तथा सञ्चार अनि मौसमको भविष्यवाणी ।
हिजोआज विकासित मुलुकले अन्य देशको सैनिक गतिविधिको निगरानीका लागि बनाएका हुन्छन् । त्यस्ता स्याटेलाइटलाई ‘स्पाई’ स्याटेलाइट पनि भनिन्छ । यी त भए स्याटेलाइट बनाउनुको उद्देश्य । भाइबहिनीहरूमा अर्को जिज्ञासा होला । स्याटेलाइट कसरी आकाशमाथि (अन्तरिक्ष) मा पुग्छ, कसरी काम गर्छ भनेर ? स्याटेलाइटमा विशेष चार भाग हुन्छन् । पहिलोमा पावर सिस्टम ।
यसमा सौर्य वा आणविक पनि हुन सक्छ । दोस्रोमा सूचना लिने र पठाउने एउटा एन्टिना हुन्छ । उचाइलाई नियन्त्रण गर्ने कन्ट्रोलर हुन्छ र अर्को हुन्छ ‘पेलोड’। पेलोडले क्यामेराले कैद गरेका तस्बिर वा पार्टिकल डिटेक्टरले लिएका तथ्यांकहरू संकलन गर्छ । अन्य अनुसन्धनात्मक कार्यका लागि चाहिने उपकरणहरू त्यहीँ जडान गरिएका हुन्छन् । प्रयोजनअनुसार उपकरणको प्रयोग गरिएको हुन्छ । यस्तै, विभिन्न सेन्सरहरू पनि जडान गरिएका हुन्छन् ।
पृथ्वीबाट पठाइएको सूचना स्याटेलाइटको रिसिभरले लिन्छ अनि त्यसलाई पुनः पृथ्वीमा सूचना प्रवाह गर्छ । पृथ्वीमा भएको ग्राउन्ड स्टेसनले त्यसको जानकारी लिन्छ । अनि हामीकहाँ उक्त सूचना प्रवाह हुन्छ । स्याटेलाइट कन्ट्रोलरले घुमाउने,उचाई बढाउने तथा स्थान परिवर्तन लगायत अन्य उपकरणहरूलाई नियन्त्रण गर्छ भने सोलार प्यानल वा ब्याट्री ऊर्जाका लागि प्रयोग हुन्छ ।
स्याटेलाइटलाई रकेटको माध्यमबाट अन्तरिक्षमा छाडिन्छ । स्याटेलाइटको कामअनुसार विभिन्न ३ वटा अर्बिटमा छाडिन्छ । सूर्यलाई पृथ्वीले परिक्रम गर्ने कक्ष नै अर्बिट हो । अर्बिट गोलाकार हुन्छ र यसलाई हामी देख्न सक्दैनौं । अर्बिटको विभिन्न उचाइमा उपग्रहरू छाडिन्छ । एकआपसमा नठोक्किऊन् भनेर स्याटेलाइटलाई विभिन्न स्थान दिइएको हुन्छ । विशेष गरेर पृथ्वीको तल्लो अर्बिट, मध्यम अर्बिट र माथिल्लो अर्बिटमा स्याटेलाइट छाडिने नेपाली पिको स्याटका निर्माणकर्ता सौरभ पौडेलले बताए । फरकफरक अर्बिटमा रहने स्याटेलाइटको काम फरकफरक हुन्छ । आकारका आधारमा स्याटेलाइटलाई क्यान–स्याट, पिको–स्याट, नानो–स्याट अनि त्योभन्दा ठूलो गरी विभाजन गरिएको हुन्छ ।
क्यान स्याटेलाइट निर्माणको पहिलो खुड्किलो हो । क्यान स्याटलाई अन्तिरक्षमा प्रक्षेपण गर्न सकिँदैन । यो एउटा कोकको क्यान आकारको हुन्छ, यसमा स्याटेलाइट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरा सिकाइन्छ । भक्तपुरमा रहेको ओरियन स्पेसले नेपालकै पहिलो पिको–स्याट बनाइरहेको छ । यसको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ ५/५ सेन्टिमिटरको छ ।
पृथ्वी र स्याटेलाइट दुवैको गुरुत्त्वाकर्षण बलका कारण स्याटेलाइट झर्न पाउँदैन । पृथ्वीबाट अन्तरिक्षमा छाडिँदा पृथ्वी घुम्ने गतिसँगै स्याटेलायट छाडिन्छ । यसमा न्युनटको चालसम्बन्धी पहिलो नियम आकर्षित हुन्छ । अर्थात् कुनै पनि वस्तुलाई बाहिरी बल प्रयोग नगरेसम्म उक्त वस्तु जुन अवस्थामा छ। त्यही अवस्थामै रहन्छ । अन्तरिक्षमा
स्याटेलाइटको गतिलाई रोक्न सक्ने कुनै वायुमण्डल नहुने हुँदा उसको गति पहिल्यैको अवस्थमा रहिरहन्छ ।